TrendSpottr: Shandura Ruzha Rwemagariro Kuita Zviratidzo Zvekutanga | Martech Zone
TrendSpottr: Shandura Ruzha Rwevanhu Kuita Zviratidzo Zvekutanga
Chipiri, January 13, 2015 Douglas Karr
Asati abuditswa nhepfenyuro yenhau, paive nekambani yekuchengetedza uswa yainyora zvese zvainyorerwa nevatengi uye yakazviparadzanisa nemusoro wenyaya. Iyo sisitimu yakashanduka kuita injini yekutengesa nekuti ivo vaigona kuona, nenzvimbo, nyaya dzaive dzichikwira mudunhu uye vozotumira zvakanyanya zvakanangwa maemail zvichienderana nemisoro yenyaya. Vanoda lawn vanozoona yambiro vobva vaenda kunotenga mhinduro yakakodzera kuchitoro - dzimwe nguva nekoponi yekuvakurudzira.
Trending mukana unoshamisa kumabhizinesi mazhinji asi vamwe vanhu havateedzere masaini anogona kunyatso kuendesa mhinduro dzebhizinesi. Inogona kunge iri mamiriro ekunze, mari, hutano, kana chero imwewo nyaya inoenderana iyo inokanganisa kutengesa. TrendSpottr inobatsira kushandura Ruzha rweMedia Media kuita matanho ekutanga.
TrendSpottr ndeye gore-yakavakirwa kufungidzira analytics kambani inozivisa uye inofanotaura mafambiro ari chaiwo-nguva kubva kumahombe makuru data, kusanganisira kubva kuTwitter neFacebook. Sevhisi yeTrendSpottr inobvumira vatengi vedu nevatinoshanda navo kuti "vaende kumberi kwekakona" nekutsvaga nhau dzichangobuda, zviitiko, nevanokurudzira vane huwandu hwehutachiona hwakanyanya uye musika kukanganisa.
Nhau, vaparidzi, vamiriri vePR, zvigadzirwa, vamiririri vehurumende, vashambadzi vemadhijitari, vashandisi venhau vezvemagariro, vatengesi vezvitoro nemasangano emari vese vari kuisa Trendspottr kuti ishandise kutsvaga kwemashoko ehutachiona, marita uye mukurumbira kutarisa, kutambudzika kwedambudziko, kushambadzira zvemukati uye fungidziro yemusika.
Trendspottr zvakare inosangana nezvose zviri zviviri Salesforce seRadian6 Buddy Media Social Studio Partner pamwe neHootsuite . Ivo vachangobva kuvhura TrendSpottr ye Instagram paHootsuite naizvo!
Tsvaga zvimwe nezveTrendSpottr uye kugona kwedu kufanotaura mafambiro ari chaizvo-nguva kubva ku data hombe nekuedza zvigadzirwa zvavo: TrendSpottr Chiratidzo, TrendSpottr Alerts uye TrendSpottr Widgets.
TrendSpottr zvakare inopa yekutsvaga, chenjedzo uye maitiro JSON API!
Tags: yambiro apibig dataFacebookGoogle +InstagramLinkedIntsvaga pasocial mediaevanhu vezvenhaumagariro enhaupasocial media chenjedzo apipasocial media apimagariro enhau mafambiromagariro enhau maitiro apitrendingMaitirowemo.myTwitter
Zvemukati Zvekushambadzira Zvinochinja Sei Kutengesa Kwako?
Kickdynamic: Hyper-Yakasarudzika Email Yemukati paVhura